Magaalooyinka ugu wanaagsan ee wax laga iibsado: 10ka meelood ee ugu sarreeya dalxiisayaashu jecel yihiin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shopping » Magaalooyinka ugu wanaagsan ee wax laga iibsado: 10ka meelood ee ugu sarreeya dalxiisayaashu jecel yihiin
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Faallo • News • Shopping • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dalxiiska Dukaameysiga waa fikrad caan ah oo lagu qeexay inay tahay qaab dalxiis oo casri ah oo ay fuliyaan martida kuwaas oo iibsashada alaabta, meel ka baxsan meesha ay deggan yihiin, ay tahay arrin go'aamisa go'aankooda safarka. Xagee bay u dukaameystayaashu u safraan?
Maaddaama tirada sii kordheysa ee dadku ay haystaan ​​tallaalkooda covid-19, socdaalku mar kale wuu sii kordhayaa, dalxiisayaashu waxay bilaabayaan inay dib uga soo muuqdaan magaalooyin badan oo adduunka ah.
Marka la go'aaminayo meesha loo socdo, dhinacyo badan ayaa soo gala ciyaarta iyadoo ku xiran dookhyada iyo miisaaniyadda.
Dalxiisayaasha raadinaya waayo -aragnimo wax -iibsi oo weyn safarkooda waxaan ku taxnay qaar ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee la booqdo sannadkan.
Dukaameysiga tooska ah iyo dukaamaysiga dukaanka dhexdiisa
Ikhtiyaarradayada wax iibsiga ayaa hadda ka weyn sidii hore. In kasta oo dadka qaar ay weli doorbidaan inay booqdaan dukaamada dhabta ah, kuwa kale waxay alaabtooda iyo adeegyadooda ku dalbadaan internetka. Dadka badankood, si kastaba ha ahaatee, waxay doorbidaan isku darka labadaba. Waxaan dalbanaa raashinka si ay u buuxiyaan qaboojiyaha, dhar cusub oo loogu talagalay dhacdo soo socota, iyo qurxinta guriga sida daabacan si aan u gaaryeelayno guryaheena.
Iyada oo la adeegsanayo taleefannada casriga ah, laptop -yada, iyo aaladaha kale ee farsamada ee nolosheena, internetka ayaa si fudud loo heli karaa daqiiqad kasta oo nolosheena ah. In kasta oo dukaamaysiga internetka aad loo jecel yahay-oo uu sii ahaan doono ikhtiyaar weyn oo badan oo ka mid ah rabitaankeena iyo baahideena-dalabka dukaamaysiga dukaamaysigu sidoo kale wuu sii xoogaysanayaa.
Maxaa qeexaya magaalo wax iibsi oo wanaagsan?
Khibradda dukaamaysiga ayaa soo jiidata dalxiisayaasha magaalooyinka adduunka oo idil. Magaalo kastaa waxay bixisaa muuqaal u gaar ah, laakiin badankoodu waxay leeyihiin waxyaabo ay wadaagaan. Waxay caadi ahaan yihiin magaalooyinka waaweyn, oo leh dukaamo kala duwan oo kala duwan iyo xarumo isku -dhafan oo leh silsilado waaweyn iyo waddooyin soo jiidasho leh oo leh dukaanno maxalli ah.
Qiimayaashu way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran waddanka ay magaaladu ku taal, iyo meesha dalxiisku ka yimaado. Magaalooyinka wax iibsiga ee caanka ah waxay bixiyaan dukaamo u dhexeeya qiimo jaban ilaa raaxo. Waayo -aragnimada guud ayaa iyaduna muhiim ah. Meelaha sida New York City iyo Paris waxay bixiyaan wax badan oo la arko, iyo sidoo kale xulashooyin badan oo hoy iyo cunto.
Magaalooyinka ugu caansan dukaamaysiga
Dalxiisayaasha, oo jecel dukaamaysiga, xaggee aadaan? Waa kuwan qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee hadda la tago.
Malaayiin dalxiisayaal ah ayaa sanad walba booqda caasimadda England. Magaaladu waxay bixisaa xarumo wax -iibsi oo waaweyn sida Westfield, dukaamaysiga raaxada ee Harrods, heshiisyo wanaagsan suuqyada waddooyinka kala duwan, iyo dukaamo aad u qurux badan. Shaaha, dharka, iyo xusuusta ayaa ah qaar ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee halkan laga iibsado. Oxford Street iyo Covent Garden waa goobo ganacsi oo mashquul ah.
Dalxiisayaasha Hong Kong waxay haystaan ​​fursado wax iibsi oo u muuqda kuwo aan dhammaad lahayn. Magaaladu waxay ku leedahay labada summadood oo heer sare ah xarumaha dukaamaysiga waaweyn iyo waxyaabo xiiso leh oo suuqyada waddooyinka ah. Kowloon waa mid ka mid ah goobaha wax iibsiga ee ugu caansan. Dalxiisayaasha raadinaya gorgortan waxay fursado badan ka heli doonaan tusaale ahaan Temple Street iyo Suuqa Jade.
Magaalada New York waxaa ka buuxa degmooyin wax laga iibsado, iyadoo Fifth Avenue uu ka mid yahay kuwa ugu caansan. Dukaammada daaqadu aad bay u fiican tahay - gaar ahaan marka Kirismaska ​​soo dhawaado oo magaaladu ay ka buuxdo qurxinta. Tuulada Greenwich, Dhinaca Hoose Hoose, SoHo, iyo Madison Avenue dhammaantood waxay bixiyaan waayo -aragnimo wax -iibsi oo gaar ah.
Goobaha wax iibsiga ee caanka ah:
Tobankan magaalo ayaa sanad walba soo jiita malaayiin qof oo soo booqda. Qaar badan oo ka mid ah dalxiisayaashan ayaa u duulaya guriga iyagoo wata boorsooyinkooda si aad uga buuxsan intii ay yimaadeen.
Wixii warar ah ee Shopping riix halkan.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 32